योग गर्दा के गर्ने के नगर्ने ? - ज्ञानविज्ञान
योग गर्दा के गर्ने के नगर्ने ?
कसले गर्ने योग ?
योग भनेको कर्ममा आउने कौशल हो । योग गरेपछि व्यवहारमा परिवर्तन आउनुपर्छ र स्वभावमा मधुरता । कर्म, व्यवहार र स्वभाव मानिसका अमूल्य तत्व हुन् । योगलाई उपचारका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । योगबाट प्राप्त हुने मुख्य कुरा सफलता हो ।
खाली पेट योग गर्नु निकै लाभदायक मानिन्छ । कहिल्यै पनि पेट टन्न भएको समय योग गर्नु हुँदैन । योग अभ्यास गरेको आधा घन्टाजति पछि खाना खानु उपयुक्त मानिन्छ ।
त्यसैले यो भन्न सकिन्छ कि स्वस्थ र सफल रहनका लागि योग गरिन्छ । योगले शरीरमा भएका रोगलाई निर्मूल गर्छ र रोगबाट टाढा राख्नसमेत मद्दत गर्छ । योग दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने क्रियाकलाप हो । योग कम्तीमा २० देखि ९० मिनेटसम्म गर्न आवश्यक छ ।
बदलिँदो जीवनशैली र गलत खानपानले मानिसलाई कुनै न कुनै रोगको सिकार बनाउँछ । नेपालमा मधुमेह, ग्यास्ट्रिक, जोर्नी, नसा र मुटुको रोगबाट थुप्रै ग्रसित छन् । जसका लागि योग उत्तम हुन्छ । अव्यवस्थित जीवनशैलीले मानिसलाई तनाव मात्र दिन्छ ।
तनाव रोगको फ्याक्ट्रीजस्तै हो । योगले स्मरण क्षमता बढाउनुका साथै एकाग्र बनाउने काम गर्छ । नियमित योग गर्ने मान्छे सधैँ तनावरहित हुन्छ । यसले आत्मविश्वास पनि बढाउने काम गर्छ र शरीरमा ऊर्जाको विकास गर्छ । योगले नै मानिसभित्र अपार शक्ति पैदा गर्छ ।
योग गर्दा यस्ता नियम
योग गर्दा लुगा खुकुलो एवं सजिलो हुनुपर्छ । योग गर्ने आसन पनि सजिलो छान्नु जरुरी हुन्छ । शान्त, सफा, हावादार तथा न्यानो ठाउँमा अभ्यास गर्नुपर्छ ।
हरेक दिन एउटै समय पारेर कम्तीमा २० मिनेट योगाभ्यास गर्दा स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ
योगबाट फाइदा लिन कम्तीमा तीनदेखि ६ महिना नियमित अभ्यास गर्नुपर्छ । प्रत्येक योगासनको अवधि १५ सेकेन्डदेखि बिस्तारै बढाएर ३ मिनेटसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।
कुनै पनि आसन गर्दा शरीरलाई जबर्जस्ती गर्न हुँदैन । दीर्घरोग भएकाले योगविज्ञको सल्लाह लिएर मात्र अभ्यास गर्नुपर्छ ।
बिहानको नित्यकर्म सकेर मात्र योग अभ्यास गर्नु बढी लाभदायक हुन्छ । योग सकेपछि नुहाउँदा राम्रो हुन्छ ।
योग गर्दा तनको साथमा मनलाई पनि स्वच्छ राख्न जरुरी हुन्छ । त्यसैले योग गर्नुपहिले दिमागका सबै विकार हटाउन जरुरी हुन्छ ।
योग अभ्यास धैर्य र दृढताका साथ गर्नुपर्छ ।
योग अभ्यासको अन्त्यमा सधैँ शवासन गर्न आवश्यक हुन्छ ।
तपाइलाई यो जानकारी उपयोगी लग्यो भने कृपया सेयर गर्न नभुल्नु होला ।
Don't Miss it गर्मि मौसममा यसरी चम्काउन सकिन्छ अनुहार
Up Next यसरी निको हुन्छ पायल्स
भिटामिनले भरिपुर्ण तरकारी कर्कलो ! यसका अचुक फाइदाहरु यस्ता छन्
गाउँघरमा पाइने भिटामिनले भरिएको तरकारी हो कर्कला । कर्कलाको फल र पात नै तरकारी बनाएर खाने गर्छौँ । यसको नियमित…
गोलभेडा खेती गर्न के प्रबिधि अपनाउनुपर्छ !
गोलभेडा तरकारीको एक प्रकार जो साना-साना बोटमा फल्छ, प्रायः सबै ठाउँमा यो तरकारीको उत्पादन हुन्छ। वैज्ञानिक नाम लिकोपर्सिकोन एस्कुलेन्टमले चिनिने…
दशैँमा बालबालिकाका अभिभावकहरुका लागि रामबाण उपाय
पौष्टिक खानेकुरा र मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले दशैं बालबालिकाका लागि महत्वपूर्ण चाड हो । दशैंमा बालबालिकाले लामो छुट्टी पाउँछन् । मिठो खान,…
11 months ago mygyanbigyan
सावधान! नाकबाट रगत बग्ने समस्या छ भने, हुन सक्छ उच्च रक्तचापको संकेत
बच्चालाई कामज्वरो आउँदा, यसो गर्नुहोस
बच्चालाई कामज्वरो आउँदा विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ । -बच्चालाई उत्तानो पारेर राख्दा थुक वा अरु केही सर्किने सम्भावना हुन्छ, जुन…
यस्ता खतराका लक्षण देखिन सक्छन नवशिशुमा
१. बच्चाको हातखुट्टा चिसो हुनु, २. दूध चुस्न नसक्नु, ३. नाइटोबाट रगत वा पिप बग्नु, ४. आँखा र छाला पहेँलो…
दिन दिनै बढिरहेको गर्मीमा बालबालिकालाई जोगाउन अपनाउनुहोस् यी उपाय
गर्मीको मौसममा बालबालिकाहरु धेरै बिरामी हुने गर्छन् । उनीहरुको स्वास्थ्यमा अभिभावकले ध्यान दिएनन् भने विभिन्न प्रकारको समस्या देखिने बालरोग विशेषज्ञहरुले…
तपाइँलाई रिस कतिको उठ्छ ? रिसले निम्त्याउन सक्छ यस्ता खतरनाक रोगहरु – जानीराखौ
रिसले मानिसलाई कहिल्यै पनि राम्रो गर्दैन । जो मानिस रिसाउने गर्छ त्यसको प्राय साथीभाईहरु पनि हुदैनन् । रिसले कसैलाई पनि…